Amanethiwekhi we-SME: ukusika kokuqala kokubonakalayo | Kusuka kuLinux
Sifuna ukwenza i- «ukusika kokuqala kokubonakalayo»Ngaphambi kokuntywila ekusetshenzisweni nasekucushweni kwezinsizakalo zenethiwekhi ezivame kakhulu ezisetshenziswa kuma-SME. Sithi "ukusika okubonakalayo", ngoba nakanjani sizobhala futhi ngezihloko esezivele zimboziwe kepha nokunye ukwabiwa: ideskithophu ene-CentOS noma nge-OpenSuSE nabanye. Kungukulethwa okusadingeka ukuthi ngikwenze ngoba anginazo izinqolobane, ezingaphelele noma ezingaphansi, zalezo zinto enginazo.
Kuzindatshana zethu sinikeza kuphela i- Khomba esihlokweni ngasinye esihlanganisiwe. Akunakuba ngenye indlela. Kuyiqiniso ukuthi sizama ukubheka okuncane kulowo nalowo wabo, ngenhloso yokukhonza njengesiqondiso sabafundi abakhuluma iSpanishi lapho kuqaliswa insizakalo, noma ngabe iyahlolwa noma ikhiqizwa.
LIzinqubo ezichazwe kuzo zonke izindatshana ezishicilelwe ziyasebenza ngisho nasezindaweni zokukhiqiza. Asibhali nganoma yini esingazange siyivivinye futhi sayiqinisekisa kaningana.
Sizama ukulandela ukuhleleka okunengqondo kokulethwayo. Izihloko zokuqala bezinikezelwe ukusenza iSiteshi Sokusebenzela. Ngemuva kwalokho, nge-Debian ne-CentOS, ukwenza ifayili le- I-Hypervisor mayelana neQemu-KVM. Kamuva ukuphatha ama-hypervisors, kungaba nge-Virt-Manager, imiyalo amandla-comands, noma ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi esibonakalayo sokuphatha ama-hypervisors, okungumyalo Ingculazi, ixhunyaniswe eduze nesitolo sezincwadi libvirt.
1 Kungani siphikelela kuQemu-KVM, uVirt-Manager kanye noVirsh?
2 Kungani singabhali ngobuntu?
3 Iziphi izindatshana esizishicilele kuze kube manje?
4 Iziphi izihloko esizoxoxa ngazo esikhathini esizayo?
Kungani siphikelela kuQemu-KVM, uVirt-Manager kanye noVirsh?
Izinhlelo ezingenhla zifakiwe futhi zamiswa cishe ngendlela efanayo ekusatshalalisweni okukhethwe njengesisekelo sochungechunge lwe-SMB.
Atholakala ngokuzenzakalela ezinqolobaneni zalokhu kusatshalaliswa ngisho nakuma-DVD wokufaka.
Okungenani ngiyazi ukuthi Ubuntu, i-CentOS, ne-OpenSuSE, inikela ngakunye kwabafaki bayo inketho ezinikele yokufaka I-Hypervisor.
Akuncikile nakancane kumvelo yedeskithophu esetshenzisiwe.
Isixazululo esisuselwe ezinhlelweni ezedlule sisebenza kahle kakhulu kulezi zimo ezilandelayo, ezihlukahluka ekukhetheni i-Administration Interface, ngokuya ngenani lama-hypervisors nemishini yabo ebonakalayo, noma ngokuya ngokuthanda komuntu nalokho abakuthandayo:
Itafula - Ubuso bekhompyutha
Isikhungo sokusebenzela - Indawo yokusebenza
Ama-hypervisors amaningi njengakwisimo se-SME
Ifu, Cloud, Isikhungo sedatha, Insiza Hosting, Noma yini ofuna ukuyishayela isethi enkulu yamaseva asemzimbeni nangokwangempela
Ngeke siphike ukuthi isisombululo esise-Qemu-KVM sisabazeka kakhulu, futhi lokho kuza ngokuzenzakalela ezinqolobaneni eziningi zezinhlelo zokusebenza ze-Linux ezisetshenziswa kakhulu endaweni yebhizinisi.
Ku Isikhungo sedatha lapho kusebenza khona umngani wami nozakwethu uJulio Cesar Carballo, banamaseva angaphezu kuka-4000 aneQemu-KVM, i-OpenStack interface interface, kanye nohlelo lokusebenza lwe-Ubuntu Server. Omunye umngani nozakwethu, u-Eduardo Noel Nuñez, unama-hypervisors ama-4 ane-Qemu-KVM, isikhombimsebenzisi sokuphatha i-oVirt, kanye nohlelo lokusebenza lweCentOS 7. Ungakholelwa nje kwizethenjwa esizivezayo njengezibonelo ezaziwayo. Sesha i-Intanethi ukuthi zingaki izinkampani ezinkulu nezincane ezisamukele lesi sixazululo.
Abafundi abaningi kanye nabalandeli bezindatshana zami bayazi ngokuthanda kwami ​​i-Debian. Kodwa-ke, bengihlala ngibubona ubuholi benkampani yeRed Hat, Inc. emhlabeni webhizinisi leLinux, ingasaphathwa eyeSuSE Enterprise kanye nemikhiqizo.
Umbono wami: Ukubheja kweRed Hat, Inc. ngokumelene nezixazululo zeVMware, yiQemu-KVM ngqo, i-libvirt, i-Virt-Manager ne-oVirt. Ngokwolwazi lwami oluncane kanye nokuqonda, iRed Hat, Inc, sekuyisikhathi eside ithatha ingxenye ephambili kaphayi. 😉
Kungani singabhali ngobuntu?
Sibheka ukuthi izihloko ezihlanganisiwe maqondana nokuqaliswa kwezinsizakalo zenethiwekhi ku-Debian, zisebenza njengesiqondisi sokuqala se-Ubuntu. ICanonical ihambisa ngamandla ukusatshalaliswa kwayo kwe-Ubuntu Server iye endaweni yebhizinisi. Ngize ngafunda nemibono yokuthi ushiye i-Ubuntu Desktop yakhe kancane, indlela engingavumelani nayo. Ubuntu ukusatshalaliswa okwenze umehluko ekusetshenzisweni kweLinux kumaDesktops. I-Linux Mint, inzalo eqondile ye-Ubuntu, inikeza -kunye kokunye ukwenziwa ngcono- isisombululo esiphelele ngokwenani lamaphakeji okuqala adingekayo, ukwenza impilo ibe lula kumsebenzisi osanda kufika eLinux.
Uma sivakashela amasayithi amaningi anikezelwe ukushicilela izindatshana mayelana nezinsizakalo, sizothola okuningi mayelana nalokhu kusatshalaliswa. Ngakolunye uhlangothi, kunezindawo ezisemthethweni ze-Ubuntu ezinikezelwe esihlokweni sezinsizakalo zenethiwekhi lapho kunikezwa khona izindatshana ezinhle kakhulu.
Esihlokweni Ukusatshalaliswa ngokuhamba kwesikhathi kweLinux Distribution sikwenze kwacaca ukuthi kungani sikhethe iDebian, i-CentOS - RHEL, ne-OpenSuSe - I-SuSE, njengokwabiwa okuyisisekelo kwama-athikili ethu.
Iziphi izindatshana esizishicilele kuze kube manje?
Iziphi izihloko esizoxoxa ngazo esikhathini esizayo?
Ukuqaliswa kwezinsizakalo ezivame kakhulu kuma-SME: i-DNS, i-DHCP, i-NTP, njll.
Izikhungo zokusebenza ze-CentOS ne-OpenSuSE
I-DNS ne-DHCP ene-OpenSuSE isebenzisa i-Yast
… Nokunye okuningi
Futhi kuze kube yi-adventure elandelayo, bangani!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Amanethiwekhi we-SME: ukusika kokuqala kokubonakalayo
Umngane omuhle kakhulu wochungechunge uFederico. Njengoba sengishilo, ngiyaqhubeka nokuyisebenzisa ekukhiqizeni ngemiphumela emihle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, sengivele ngenze i-laboratory yami yasekhaya ukuqhubeka nezihloko engingeke ngizisebenzise enkampanini yami. Ukuhlonipha kwami!.
Ngijabule ukuzwa ukuthi uthathe iseluleko sami, Zodiac. Linda izindatshana ezilandelayo.
Yeka umsebenzi omuhle owenzile kubhulogi, sithandwa sami uFederico, ngingomunye walabo abasungule ilabhorethri yomuntu siqu ngokulandela izincomo zakho igxathu negxathu. Akungabazeki ukuthi enye yezinto engizilibazisa ngazo kamuva nje ukufunda izindatshana zakho ezinembile nezinolwazi ngokuningiliziwe.
Ngiyabonga kakhulu ngayo yonke imininingwane nangayo yonke iminithi oyinikezayo ukufundisa umuntu onjengami, sinokuningi, kuningi esingakufunda.
Ngakho-ke, sithandwa seLagarto, njengoba kunezivakashi eziningi kulolu chungechunge - noma ngabe zingaphawuli - ngizoqhubeka ngibhale. Lindela okulandelayo mayelana ne-openSUSE!